Ahoana ny fametrahana ny foibe mifehy MIUI 12 amin'ny telefaona hafa tsy Xiaomi | Androidsis
DaniPlay | | Fampiharana Android, Ataovy miavaka ny Android
MIUI 12 manana a foibe fanaraha-maso izay nahazo aingam-panahy avy amin'ny rafitra fiasan'ny iOS, na dia be fikirakirana aza izy io hifehezana ny zava-drehetra. Tsy ilaina ny manana fitaovana marika Xiaomi hampiasa an'ity ivon-toerana ity, satria misy fampiharana manan-danja tokoa amin'ny fisehoany tena matihanina.
Raha manana Android 5.0 na kinova ambonimbony kokoa ianao dia azonao atao ny mametraka an'io fitaovana io izay anananao ny ivon-toerana fanaraha-maso tena mitovy amin'ny an'ny soson'ity mpanamboatra ity. Afaka manana ny fampandrenesana sy fikirana haingana asehon'ity foibe fanaraha-maso MIUI 12 ity.
Alao an-tsaina hoe mankafy azy io amin'ny Motorola, Huawei, ZTE-nao na marika rehetra, satria mifanaraka amin'ny rindranasa rehetra izay ahafahantsika mampiasa azy amin'ny fotoana rehetra. Manolotra interface tsara izy io, tsotra ampiasaina ary azo alamina amin'ny lafiny rehetra.
1 Ity no ivon-toerako mifehy
2 Izy io koa dia manana safidy fandoavambola
Ity no ivon-toerako mifehy
Vantany vao nametraka ianao Ny Ivon-toerako Control dia hampahatsiahy anao ny momba ny MIUI 12's My ControlRaha mbola tsy nahita an'io ianao dia tsara ny mahita azy mahita fa afaka mamoaka be dia be amin'ny telefaona. Amin'ity tranga ity, ny My Control Center dia voadio kokoa, satria manana fikirakirana lehibe kokoa noho ny an'ny Xiaomi miaraka amin'ny ivon-toerany.
Ankoatr'izay, raha apetrakao io dia hahita fiovana lehibe ianao, satria hanana ny interface layout efa niova tanteraka raha manokatra ny My Control Center ianao, raha mitazona ny interface misy azy manokana. Te handika tanteraka ny zava-drehetra, ny interface, ny fametrahana ary ny safidy ilay developer app, na dia misy karazany kely aza.
Con Ivotoerana fanaraha-maso ahy Azontsika atao ny manova ny zava-drehetra amin'ny toerana iray, mamela antsika hanamboatra ny zava-drehetra izy io, manova ny tontonana tsirairay, manitatra na mampihena ny kisary birao, ankoatry ny lahasa maro hafa. Raha mitsiriritra ny tsy manana ny Foibe fanaraha-maso Xiaomi ity no fotoana fampiasana azy maimaim-poana satria fitaovana maimaimpoana io.
Izy io koa dia manana safidy fandoavambola
Raha te hamaha endri-javatra maro hafa an'ny Ivotoerana fanaraha-maso ahy ary esory ireo doka vitsivitsy miseho, afaka mividy ilay fangatahana ianao amin'ny 2,79 euro, manana fanitsiana bebe kokoa ary fananganana tanteraka amin'ny fampiasana ny My Control Center. Ny hany zavatra ratsy dia amin'ny teny anglisy izy io, na eo aza izany dia mora ampiasaina izy io.
Ivotoerana fanaraha-maso ahy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fametrahana ny foibe mifehy MIUI 12 amin'ny telefaona hafa tsy Xiaomi
Jasmin dia hoy izy:
App mahatalanjona, misaotra betsaka !! Tena tsy mampaninona ahy ny mampiasa telefaona Xiaomi ho an'ity karazana fanaingoana ananany ity ??
Valiny tamin'i Jasmin
Torohevitra 8 hitandrina ny findainao Android ho voaro amin'ny fandrahonana amin'ny cyber
Ny fanavaozana ny fiarovana ny volana Jolay ho an'ny Galaxy A70 dia misy izao